'Kungcono ubize uSawule' Ekugqibeleni woyisa esona siphoso sakhe sikhulu - Itv
Eyona Itv 'Kungcono ubize uSawule' Ekugqibeleni woyisa esona siphoso sakhe sikhulu
'Kungcono ubize uSawule' Ekugqibeleni woyisa esona siphoso sakhe sikhulu
UBob Odenkirk njengoJimmy McGill ungene Kungcono ubize uSawule .UGreg Lewis / AMC / Sony Imifanekiso yeTV
Ngubani onokucinga ukuba ukuphuma okusekwe kumlinganiswa wesibini wokuhlekisa kuya kuba ngumboniso olungileyo ukuba kungangcono kunowokuqala? Ndiyathetha, ngokuqinisekileyo, kwenzeka Frasier , kodwa iyenzeka ngoku nge Kungcono ubize uSawule , prequel / spin-off ye Iphula kakubi Ujolise kwigqwetha elinolwaphulo-mthetho elinguSaul Goodman.
Ngexesha lokuqala le Kungcono ubize uSawule , kwacaca ukuba uhlobo lomboniso njenge-prequel ye Iphula kakubi Yahlula ibali laba yimiboniso emibini eyahlukeneyo: kwelinye icala kwakukuwa kabuhlungu kubabalo lukaJimmy McGill (Bob Odenkirk) kunye notshintsho olucothayo lwaba nguSaul Goodman, kwaye kwelinye ibali lomphandi / isilungisi sikaSawule, uMike Ehrmantraut, njengo weza kubandakanyeka kwindawo yeziyobisi eNew Mexico. Ngelixa ibali likaJimmy lisazise kwiingxabano ezintsha kunye nabalinganiswa abanjengoKim Wexler (umboniso we-MVP, uRhea Seehorn) kunye nomntakwaboJimmy u-Chuck (Michael McKean), Inxalenye kaMike yomboniso yayiyeyona nto abalandeli bayicingayo Iphula kakubi i-prequel iya kuba, njengoko yongeza iinguqu ezincinci zabalinganiswa belifa elithandwayo njengentsapho yaseSalamanca, kunye neNdoda yenkukhu uqobo, uGus Fring (Giancarlo Esposito).
BONA KWAKHO: Kutheni 'uMntu onomdla' esi sisitshixo sokuqonda 'Westworld'
Kwi udliwanondlebe kuyo yonke le minyaka , bonisa abaqulunqi be-Vince Gilligan kunye noPeter Gould baxoxe ngendlela isigqibo sokwahlula-hlula esi sibini siphume kubo befumanisa, bothuswa kukuba, bayamthanda uJimmy McGill kangangokuba abafuni ukukhawulezisa inguqu yakhe abe nguSaulman . Oku kubangele iziphumo ezinkulu kulo lonke umboniso njengoko sazi, njengabalinganiswa ababebandakanyeke kakhulu kwibali likaJimmy ekuqaleni kodwa bonke banyamalala kwicala lakhe lomboniso, njengoNacho Varga noTuco. Ngokuqinisekileyo, inqanaba lokwahlukana phakathi komxholo webali likaGus kunye nomxholo webali likaJimmy wawusoloko uyimfuneko ngenxa yokuba abalinganiswa ababini bengazange bahlangane Iphula kakubi , Kwaye kuyonwabisa ukubona ukuba uGus uyakha njani i-superlab yakhe, kodwa siyazi ngendlela engakumbi ngaye kunokuba sisazi ngabalinganiswa abatsha. Oku kukhokelele kumboniso oziva ungazidibanisi kwaye ungazithembi malunga nokuba ifuna ukwenza ntoni.
Oko kukuthi, kude kube leli xesha lifiphise imigca phakathi kwesiqingatha sesibini. Xa umboniso waphinda wadibanisa uJimmy noNacho, (Michael Mando) kwaye wenza uJimmy aqale ukwenza umsebenzi wakhe noLalo Salamanca (Tony Dalton), Kungcono ubize uSawule Ababhali bazobe indlela yokuba babe nekeyiki yakhe kwaye bayitye nabo: ngaba uSaul Goodman enze imisebenzi engaqhelekanga kubadlali bexesha elikhulu ngaphandle kokumenza ukuba abone izikimu ezikhulu.
Okokuqala, yayikudlulisa umyalezo kwenye yamadoda kaLalo entolongweni, emva koko yayimele uLalo enkundleni ukuba amkhuphe ngebheyile kwityala lokubulala, kwaye kutshanje wayezokulanda isixa esikhulu semali kuLalo. Kungcono ubize uSawule ishiye ngcembe ngasemva zonke izinto ezingezizo ezokwaphula umthetho kumxholo wayo, njengokuqhawula ubudlelwane bukaJimmy kunye neqabane lomntakwabo uHoward (uPatrick Fabian) kunye nobomi bakhe obudala, kwaye enganikeli uJimmy izizathu zokugcina iimfihlo kuKim njengoko batshatile ngoku. Ke isiqendu sale veki, indlela embi yoKhetho ibone uKim eshiya isikhundla kwiBhanki iMesa Verde, eshiya ngasemva ubomi bakhe ngaphambi kukaSaul Goodman kwaye wamkela indima yomntu othembekileyo- kwaye mhlawumbi neqabane lakhe kulwaphulo-mthetho njengoko naye ngoku ezibandakanya noJimmy / Saul kunye nenqwelomoya.
Sisenokungafumani nalinye ibali, elihambelanayo emva koku, kodwa Kungcono ubize uSawule Uyenzile yacaca ngezi ziqendu zidlulileyo ukuba akukho kubuya kuJimmy. Uya kuhlala esecaleni, ebizelwa ukwenza izinto ezincinci, kodwa kuyacaca ngoku ukuba sidlulile kwinqanaba apho besinomboniso malunga noJimmy McGill kananjalo Iphula kakubi prequel, kwaye sifikelele kwinqanaba apho wonke umboniso uyingaphambili Iphula kakubi .
Ewe kunjalo, kusekho imibuzo eseleyo. Asazi ukuba kwenzeka ntoni kuKim (nangona esi siqendu sokugqibela sicacisa ukuba akufuneki sikhathazeke malunga nokuba abanye abantu bazakwenza ntoni kuKim, kodwa kufuneka sizikhathaze ngento anokukwazi ukuyenza kwabo bazama ukumenza buhlungu), kwaye asazi ukuba yintoni kanye kanye ubudlelwane phakathi kukaSawule noGus buya kuba xa kugqityiwe oku. Kukho ithuba lokuba ababhali bafumane indlela yokwenza ukuba la madoda mabini ahlangane nangona kungakhange kuthethwe ngawo Iphula kakubi , kodwa kukho olunye ulwalamano oluvela kuloo mboniso oluye lwatshintsha ngokusisiseko ngezi ziqendu zimbalwa zidlulileyo.
Nokuba iphelela phi le nto kuSawule, Kungcono ubize uSawule Uluhlaziyile ulwalamano lukaSawule noWalt hayi njengesihlandlo sokuqala ukujongana nomdlali wexesha elikhulu, kodwa njenge-do-up kaSawule, ngoku othe wanqwenelela ukutya kwakhe ngezithembiso zembuyekezo enkulu yemali, nokuba iza ngomzimba omkhulu kwaye ingozi ngokwasemoyeni.
Intombi yaseBloomberg uDiana Taylor isoyikisa ngokurhoxa kwiBhodi kaSotheby ukuba iimfuno zeQela leQela ziNgqinelana (Ividiyo)
U-Lin-Manuel Miranda Uhamba Ngokulandelayo? Ukunika iDisney iPrincess yayo yokuqala enkulu yeScreen
UMeghan noHarry bathatha ikhefu emva kokufika kosana lwabo ukuze bonwabele ixesha losapho
ukujonga ngokupheleleyo ukubuyela umva kwefowuni enegama ngo-2018
ngaphezulu kwekhawuntara yecvs
hamilton uza nini disney plus
thina vs i-billie yeholide